Kutshanje, iBitcoin ibonakala ikwingxaki. Nangona ixabiso leBitcoin libonakala lingazinzanga kakhulu, imali yedijithali ikwixesha lokudityaniswa kwezi veki zimbini zidlulileyo, emva kokubetha kancinci i-7 470 yeedola. Ukuhambahamba phakathi kwendawo ephezulu ye-6,000 yeedola kunye nendawo ephantsi ye- $ 7,000. Hayi ...
Nge-31 ka-Okthobha ka-2008, i-ID esayinwe nguSatoshi Nakamoto wayisombulula le ngxaki ngephepha elinamaphepha ali-9 ngendlela yokundibhatala kumnatha wonxibelelwano ongaziwayo. Ngoku siyazi ukuba indoda eyimfihlakalo eyaziwa ngokuba nguSatoshi Nakamoto kunye nalawo maphepha alithoba adalwe ngumoya omncinci olingana ne-100 bill ...
Kwangoko kwiminyaka engama-700 ngaphambi kokuba iSweden ikhuphe imali yokuqala yamaphepha yaseYurophu ngo-1661, iChina yayiqale ukufunda ngendlela yokunciphisa umthwalo wabantu abaphethe iingqekembe zobhedu. Ezi ngqekembe zenza ubomi bube nzima: bunzima kwaye benza ukuhamba kube yingozi. Emva kwexesha, abathengisi bagqiba kwelokuba bafake ezi ngqekembe kwi ...
Ikhonteyina ye-btc, isikhongozeli se-antbox, kusetyenziswa izixhobo zemigodi ye-crypto, isikhongozeli somlilo, Isitya sebhitmain, asic imigodi asic,